Filament Tepi Yakateedzana Fekitori - China Filament Tepi Series Vagadziri, Vatengesi
Filament tepi kana tambo yekumonera ndeye yakamanikidza-inonamira tepi inoshandiswa kune akati wandei ekurongedza mashandiro senge kuvhara mabhora efaibhodhi mabhokisi, kusimbisa mapakeji, kusunga zvinhu, pallet unitizing, nezvimwewo. polypropylene kana polyester firimu uye fiberglassfilaments yakadzamidzirwa kuwedzera yakasimba tensile simba. Yakagadzirwa muna 1946 naCyrus W. Bemmels, musayendisiti aishandira Johnson naJohnson.
Mhando dzakasiyana dzemamaki e filament tepi anowanikwa. Vamwe vane mazana matanhatu emakirogiramu esimba rekuputira pamasendimita ehupamhi. Mhando dzakasiyana uye mamaki ekunamatira aripo.
Kazhinji kazhinji, tepi yacho inosvika 12 mm (approx. 1/2 inch) kusvika 24 mm (approx. 1 inch) yakafara, asi inoshandiswawo mune mamwe hupamhi.
Mhando dzakasiyana dzesimba, calipers, uye ekunamatira mafomu anowanikwa.
Iyo tepi inowanzo shandiswa sekuvharwa kwemabhokisi ane mabhokisi senge izere bhokisi rinopindirana, shanu jira folda, yakazara teresikopu bhokisi. "L" mafomu akaumbwa kana mitsetse inoiswa pamusoro pekupindirana, ichitambanudza 50 - 75 mm (2 - 3 inches) pane iwo mapaneru emabhokisi.
Inorema mitoro kana isina kusimba kuvakwa kwebhokisi kunogona zvakare kubatsirwa nekushandisa matanda kana mabhandi efaipi tepi kubhokisi.
Inodzivirira fiberglass inosungira tepi
Iyo tepi yefaipi chigadzirwa chinonamira chakarukwa kubva pagirazi faibha kana polyester fiber ine PET firimu sechinhu chepasi.
Iyo ine yakasimba tensile simba uye deformation kuramba, anti-kutsemuka, yakanakisa yekuzvinamatira, inodziya kupisa conduction, yakanyanya tembiricha resistance.Iyo filament tepi inoshandiswa zvakanyanya mukuiswa chisimbiso cheanorema basa makatoni, nhovo zvinhu zvichitenderera nekugadzirisa, kusunga tambo pombi tambo, nezvimwe. .
Washington City Offices Tepi